Ducati Monster 696 အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲရောင်းအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34594)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9842)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7948)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7124)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (6997)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, Review, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6138)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5660)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5353)
Home → Ducati → Ducati Monster 696 အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲရောင်းအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်
1 ဇန်နဝါရီ 2015 | Author: dima | Comments Off on Ducati Monster 696 အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲရောင်းအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်
But the Monster isn’t just some marketing guy’s flash of brilliance. The machine provides all-important Ducati flavor and style atamore affordable price, with various models spun offacentral theme. And the bellwether of where Ducati is going with this concept in the future is the 2009 ဧရာမသတ္တဝါကြီး 696.
Despite the relatively affordable pricing. you can readily experience the essential flavor of the storied Italian marque in any long, sweeping corner. အဆိုပါ 696 flicks in instantly in response to the rider’s input, then is stable and predictable at full lean, able to describeaperfectly precise arc, needing just tiny variations in pressure at the flat bars. At the same time, the engine responds to the rider’s right wrist withacompelling exhaust note that alters in intensity at every small change of throttle position.
The engine’s dead smooth at that speed too, and the bike feels like it can maintain that pace for days. Like other V-twins (sorry Ducati, L-twins) there’s pronounced vibration at low engine speeds at big throttle openings that discourages one from fully exploiting the good spread of torque. Below about 4,000 rpm ပါ, the engine thuds palpably if you twist the grip.
Since the revised L-twin (now with new heads and bigger valves) pulls willingly to just past its power peak of 9,000 rpm ပါ, there’s plenty of range. And when it runs out, well, the shifter works smoothly, and the clutch isavery light pull, even if it engages late in the lever’s throw, and is pretty much an on-off mechanism. This makes riding around townabit tricky until you get used to it, but it’s great for normal street riding because you just give the clutchashort pull during shifts and the job’s done.
Ducati Monster 796 ဆိုင်ကယ်တွင် Ash ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်
19.06.2015 | Comments Off on Ducati ဖိလစ်ပိုင် Diavel Cruiser လွှတ်တင် – သတင်း
19.06.2015 | Comments Off on Ducati 916 – ဆိုင်ကယ်, ဒဏ္ဍာရီ – စာမျက်နှာ2– Features – Visordown
Brammo Enertia ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati Diavel စမတ် eScooter Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ER-6n မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Ducati 60 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး AN 650 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဆူဇူကီး Colleda CO အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Bajaj Discover Ducati Desmosedici GP11 Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ DN-01
Saturday | 20.06.2015 | Comments Off on Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Saturday | 20.06.2015 | Comments Off on 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
Saturday | 20.06.2015 | Comments Off on ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
Saturday | 20.06.2015 | Comments Off on 2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 Review – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
Saturday | 20.06.2015 | Comments Off on ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
© 2019. သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions